Ronaldo oo wiilkiisa ugu hambalyeeyey xulka 18 jirada Braziil oo lagu daray+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Ronaldo oo wiilkiisa ugu hambalyeeyey xulka 18 jirada Braziil oo lagu daray+Sawiro
(08-07-2017) Cayaaryahankii weynaa xulka dalka Braziil iyo Inter Milan Luis Ronaldo ayaa hambalyo u diray Wiilkiikiisa curadka ah kadib markii lagu daray xulka 18 jirada ka hooseeya Xulka dalka Braziil.
Ronald Nazario de Lima oo ah Wiilka curadka ah oo uu dhalay Xidigii weynaa ee Ronaldo ayaa looga yeeray Xulka 18 jirada Braziil oo dhawaan la dheeli doona koox lagu magacaabo Maccabiah Waxaana uu ka dheelaa wiilkaan dhanka Weerarka sida aabihii oo kale.
Xidigaan da.da yar ee Ronald Nazario de Lima ayaa u dheela koox dalka Braziil ah Waxaana lagu tilmaamaa in uu u dheelo sida Aabihii oo kale isaga oo mustaqbal kuleh kubada Cagta.
Ronaldo ayaa u dheeley Xulka Braziil 118 kulan sidoo kale kooxihii uu soo maray waxa uu u saftay 775 kulan waana mid ka mid ah Cayaartoydii ugu fiicneyd ee soo martay Calaamka oo dhan hadase Waxaa soo baxay Wiilkiisa oo geli doona booskiisa.
Hooyada dhashay wiilka Ronaldo ayaa lagu magacaabaa Milene Domingues waxa uuna dhashay xiligii uu u dheelayey kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga balse way kala tageen waqti kadib Waxayna lafteedu ahayd Cayaaryahanad dheesha kubada Cagta.